Megacubo: Mpampiasa IPTV maro fiteny mahasoa multiplatform | Avy amin'ny Linux
Megacube no manaraka antsika fampiharana multimedia hojerena. Rehefa avy nandefa momba Popcorn sy Stremio, anjaran'ity mahaliana sy manaitra ity izao IPTV Player, izay tena mora hita Amin'ny fahitalavitra mivantana ary horonan-tsary amin'ny Internet.
Megacube dia programa mahatalanjona handaniana atiny Fantsona fahitalavitra mivantana, amin'ny Internet sy amin'ny toerana rehetra eto an-tany, anisan'izany Fantsona radio. Ary izy rehetra, amin'ny alàlan'ny a interface tsara sy tsotra izay matetika manintona, indraindray betsaka kokoa noho ny an'ny programa hafa mitovy amin'izany, ho an'ny mpampiasa sasany.
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialin'ny fampiharana, voalaza toy izao manaraka izao:
"MegaCubo dia tetik'asa mivelatra malalaka, malalaka amin'ny rehetra, tsy misy fomba fandoavam-bola. Ny tanjony dia ny manolotra traikefa tsotra, haingana ary azo ampiharina amin'ireo mpampiasa Internet hijerena fahitalavitra an-tserasera, hialana amin'ireo olana fantatra izay atrehin'izy ireo rehefa manandrana mijery fahitalavitra amin'ny alàlan'ny browser izahay.".
Ary koa, miaraka amina fanatanterahana izany ho an'ny Windows (.exe) sy Linux (.AppImage / .tar.gz), ary miaraka amin'ny fanohanan'ny fiteny amin'ny Espaniôla, Anglisy, Portiogey ary Italiana. Toy ny azo jerena sy sintonina avy amin'ny tranokalan'izy ireo GitHub.
1 Megacubo: Mpilalao IPTV
Megacubo: Mpilalao IPTV
Anisan'ireo toetra mampiavaka azy na fampiharana izay mampiavaka azy na tsia: ireto manaraka ireto:
Mode miniplayer: Izany dia manamora ny famokarana amin'ny «Miniplayer» na ny maody Miniature Player votoaty naverina navoaka, hahafahana miditra amin'ny tranokala na rindranasa hafa raha mbola mijery azy io, eo amin'ny zoron'ny efijery safidintsika.
Asa fanoherana ny dokam-barotra: Manalefaka sy manamora ny fampiratiana ny atiny fanaovana dokam-barotra amin'ny fomba azo ekena kokoa ho an'ny mpampiasa izany, amin'ny alàlan'ny fandaniana ny atiny izay misy azy ireo.
Fitantanana mora ny Favorites: Izay mamela ny manampy fantsona misokatra amin'ny fizarana ankafizin'ny programa, hahafahana mijery azy ireo mivantana avy eo. Mba hanampiana, tsindrio ny bokotra "Ctrl + D" ary hanesorana azy, tsindrio indray ny bokotra "Ctrl + D", raha misokatra na mamoaka ilay fantsona.
hafa: Vondron'ireo mpampiasa tsy mitsaha-mitombo izay manampy tsy an-kijanona ny fantsona vaovao, izay afaka miavaka amin'ny fizarana fantsom-panampiana izay ahafahan'izy ireo mampiseho ny angon-tsain'ny mpanatrika tratra amin'ny Internet saika tena izy. Ankoatra ny hafa, mandroso kokoa.
hametraka Megacube dia mora be, mila mihazakazaka fotsiny ianao a root terminal la baiko baiko manaraka:
Raha ho ahy manokana dia notanterahiko tamin'ny lalana / opt miaraka amin'ny mpampiasa ahy mahazatra miaraka amin'i tombontsoa ho an'ny mpitantana (sudoers). Aorian'ny fanatanterahana ny baiko, ary raha tsy misy lesoka dia azo atao amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana ao amin'ny menio lehibe, sokajy multimedia.
Rehefa manomboka voalohany, manontany ny fangatahana raha te hampiasa ao ianao fomba manokana na zaraina. Ho an'ny tranga fitsapana, dia mifidy ny safidy faharoa izahay, ary avy eo ho azy fikarohana bara niroso tamin'ny fikarohana izahay online content nifanindry tamin'ny a lamina fikarohana. Raha vantany vao nahazo rohy sy voafantina ny rohy iray, anisan'ireo naseho marobe, manandrana mampifandray amin'ny atin'ny fantsona voafantina ilay rindranasa mba hampisehoana azy eo amin'ny efijery, raha mbola azo idirana mandritra io fotoana io izy.
Raha fintinina ary ho ahy manokana dia toa ahy a safidy mahaliana hampiasaina raha sendra misy antony tsy azo ampiasaina Kodi, Stremio, Fotoana Popcorn ary zavatra hafa no tadiavinao fa tsy hampiasa fotsiny VLC na programa an'ny renirano. Nasongadiko ihany koa fa araka ny zavatra niainako, elaela vao misokatra, na dia heveriko fa angamba aza, dia noho ny hafainganan'ny fifandraisako amin'ny Internet.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Megacubo», ilaina sy intuitive IPTV Player (Televiziona Internet), izay manome vahaolana mora sy tsotra hijerena haingana sy mivantana Amin'ny fahitalavitra mivantana ary horonan-tsary amin'ny alàlan'ny Internet; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Megacubo: mpilalao IPTV marobe sy fiteny maro karazana
ry sakaiza malalako, maharitra fotoana fohy vao mifandray, maso ampiasaiko ao amin'ny ubuntu cinnamon remix 20.04, ka tsy dia azo antoka izay hitranga hehe, misaotra nizara
FRANCISCO Alice dia hoy izy:
Fampiharana tena mahaliana, tiako ho fantatra raha ho an'ny boaty finday sy Android io
Valiny amin'i FRANCISCO Alicea
Manana olana aho, tsy manome ahy audio manana linux mint 19.3 aho
Miarahaba anao Sam! Nikaroka tamin'ny Internet aho ary tsy nahita antontan-taratasy momba izany olana audio izany. Tsy azoko nolazaina anao hoe inona izany, tsara ho ahy izany rehefa nametraka azy aho. Mampiasa Stremio aho, tsara kokoa io. Mampiasa azy io aho izao tsy misy olana.